Myanmar Climbers Scaled Mt.Chola as Nation’s First Time | Climb O'Clock
Big Waves of Myanmar Youth on Local Mountains Ranges →
Myanmar Climbers Scaled Mt.Chola as Nation’s First Time
Posted on July 17, 2016	by climberdoelone
Expedition Member KyawYeNaing with Myanmar National Flag on Mt.Chola, Sichuan Province, China. Mr.Kyaw Ye stay at Camp 2, 17500 ft due to his altitude sickness, while4Myanmar Climbers ( Mr.Ye Htut, Ms.YiLi, Mr.Ye Win & Ms.EiKhaing summited Mt.Chola summit 6,168m(20,236ft) on 14 July 2016. (Photo Credit: KyawYeNaingFacebook)
Four Mandalay Climbers made Myanmar’s First Ascent of Mt. Chola (6,168m) Tibet/China this Friday 14 July 2016.
Team of6Myanmar Climber made their independent expedition to Mt.Chola in Sichuan Province，China early of this month July.
The team withagreat gender balance,3Men and3Women, they are ( Mr.Ye Htut, Ms.YiLi, Mr.Ye Win , Ms.Ei Khaing, Mr. KyawYeNaing and Ms. Tin Tin Zar ). All of them based in Mandalay, Ancient Capital of Myanmar which actuallyacity full of adventures from DownHill tracks , Climbing Crags, Hiking Trails to Caves and Big Waterfalls.
4 out of6climbers successfully scaled the summit of Chola, ( Mr.Ye Htut (4:45pm), Ms.YiLi (5pm) , Mr.Ye Win & Ms.EiKhaing at 5;30pm respectively on 14 July 2016. Mr.Kyaw Ye Naing left at 17,500 feet Camp2, as of his altitude sickness while Ms. Tin Tin Zar remain at Base Camp of Chola. This Independent Expedition was carried by their own budget without any sponsorship.
Reportage : Doelone 17-July-2016 (Dubai, UAE)
Ye Htut holding Myanmar National Flag at Mt.Chola ( Photo Credit : YeHtutFacebook)
မြန်မာနိုင်ငံသားလေးဦးဟာ ယခုလ ဂျုလိုင် ၁၄ ၂၀၁၆ ညနေပိုင်းမှာ တရုပ်/တိဘက်-စီချွမ်ဒေသရှိ အမြင့်ပေ (၂၀၂၃၆’) နှစ်သောင်းနှစ်ရာ့သုံးဆယ့်ခြောက်ပေမြင့်သော ချိုလာ တောင်ထိပ်သို့ အောင်မြင်စွာတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဖွဲ့ဝင် ၆ဦးပါဝင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား တောင်တက်သမားများဟာ ၂၀၁၆ဂျူလိုင်၎ရက်နေ့မှာ မန္တလေး လေဆိပ်မှ ကူမင်းသို့စတင်ထွက်ခွါခဲ့ကြပြီး ချန်ဒူးမှတဆင့် တရုပ်/တိဘက်ဒေသရှိ ပေ၂သောင်းကျော်မြင့်တဲ့ ချိုလာတောင် ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ မြန်မာအမျိုးသမီးတောင်တက်သမား၃ဦးပါဝင်ခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပြင် အားလုံးဟာ မန္တလေးအခြေစိုက်ဖြစ်ပြီး ဒီခရီးစဉ်ကို မိမိအစီအစဉ်ဖြင့်စီစဉ်ခဲ့ကြပြီး ကုန်ကျစရိတ်တွေအတွက်စပွန်စာမရှိခဲ့ပါဘူး။ အဖွဲ့ဝင်၆ဦးထဲက အဖွဲ့ဝင်လေးဦးတောင်ထိပ်ကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုကျော်ရဲနိုင်ကတော့ အမြင့်ပေ ၁၇၅၀၀က တောင်ပေါ်စခန်း၂ မှာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။မတင်တင်ဇာကတော့ အခြေခံစခန်းမှာနေရစ်ခဲ့တာပါ။ ကိုရဲထွဋ်၊ကိုရဲဝင်း မယိလီ ၊ မအိအိခိုင်တို့ ၄ဦးဟာ အမြင့်ပေ (၂၀၂၃၆’) ရှိတဲ့ ချိုလာ တောင်ထိပ်ကို ဂျုလိုင် ၁၄ ၂၀၁၆ ညနေပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေကြားက အောင်မြင်စွာတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြတာပါ။
တိဘက်ဒေသက ကဝါကပို ၊ လိုလာ စတဲ့ ရေခဲတောင်များဟာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ တောင်တွေဖြစ်သလို ယင်းတိဘက်ဒေသမှာပဲလူသားများခြေမချရသေးတဲ့တောင်များစွာလဲရှိနေပါသေးတယ်။
လိုလာရေခဲ တောင်ထိပ်ကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာတောင်တက်သမားများအနေနဲ့ မြန်မာ့မြောက်ဖျားက လူသားများခြေမချရသေးတဲ့တောင်ထွဋ်များစွာကို တက်ရောက်နိုင်ဖို့အတွေ့အကြုံကောင်းတွေရရှိခဲ့မှာ အမှန်ပါပဲ။
အမြင့်ပေ (၂၀၂၃၆’) နှစ်သောင်းနှစ်ရာ့သုံးဆယ့်ခြောက်ပေမြင့်တဲ့ တိဘက်ဒေသက ချိုလာ တောင်ထိပ်ကို အောင်မြင်စွာတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်တက်သမားများကို အလေးဂရုပြုမှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ်။
Photo Credit: KyawYeNaing
Photo Credit : TinTinZar
Climbing on the Ridge (Photo Credit: Tin Tin Zar)
Crevasses of Mt.Chola (Photo Credit : Tin Tin Zar)
Mt. Chola High Camp. (Photo Credit : Tin Tin Zar)
Glaciers of Mt. Chola (Photo Credit : Tin Tin Zar)
This entry was posted in Mountaineering, Myanmar. Bookmark the permalink.